Site n’aka onye edemede Teta! na Republic of Korea
NYE ndị Korea, uwe karịrị nanị ihe e ji ekpuchi ọtọ. Otu ihe atụ na-egosi nke a bụ ejiji ndị Korea a na-akpọ hanbok.
Uwe A Na-akwa n’Ụzọ Pụrụ Iche
Ihe mejupụtara ejiji hanbok bụ uwe owoghoro na sket owoghoro nke na-agbadaru n’ala. * N’ụfọdụ n’ime ha, sket ya na-eto ogo okpukpu anọ karịa uwe ya. N’ihi ya, ọbụna nwanyị dị mkpụmkpụ na-adị ka ò toro ogo ma o yiri ya.
A na-asụ sket Hanbok asụ̀. Aka ya na-emepe ka nku nnụnụ, ebe sket ya na-esi n’obi gbasara ruo n’ala. Iji mee ka a hụkwuo ebe obi nke onye yi ya, a na-adụnye ákwà e kere ka taị n’ebe obi ya. Ọ na-afọkwa nke nta ka ọnụ ákwà ahụ e kere ka taị na-akpụ n’ala. Ọtụtụ hanbok nwekwara ọmarịcha ihe osise fụlawa na ihe osise ndị ọzọ e ji chọọ ha mma n’aka na n’olu uwe ha nakwa na sket ha. N’ezie, otú hanbok haruru, ọdịdị ya, na ụcha ya gbakọrọ aka mee ka ọ bụrụ ejiji magburu nnọọ onwe ya.
Uwe A Pụrụ Iyi Mgbe Ọ Bụla
Otú e si akwa hanbok na-eme ka mma ya pụtakwuo. Ebe ọ bụ na a na-esikarị n’ihe ndị sitere n’okike enweta ihe ndị e ji ekwe ákwà hanbok, ọ dị mfe iyi ya mgbe ọ bụla n’afọ. Dị ka ihe atụ, hanbok e si n’ahụ́ osisi dị ka hemp nweta ihe e ji kwee ya, na-eme ka ikuku na-abata n’ahụ́ onye yi ya. Nke a na-emekwa ka ahụ́ jụọ onye ahụ oyi ma o yiri ya n’oge okpomọkụ n’agbanyeghị na ọ ga-ekpuchicha ahụ́ ya. Ihe ndị ọzọ e ji ekwe ya na-eme ka ahụ́ kporo onye yi ya ọkụ, nke a na-eme ka ha kara baa uru n’oge ụgụrụ.
Uwe Hanbok na-ekusa ekusa n’ahụ́. A kwaghị ya otú ahụ iji mee ka ọ bụrụ ejiji na-ewu ewu kama ọ bụ n’ihi ezigbo mkpa e nwere ọtụtụ narị afọ gara aga bụ́ mgbe a na-agbakarị ịnyịnya n’ógbè ahụ. Magazin bụ́ Culture & I kwuru, sị: “E wepụtara uwe a iji na-eche oyi na iji na-achụ nta ma na-achịgharị anụmanụ.” N’ihi ya, ndị Korea na-agba ịnyịnya ekweghị eyi uwe ọ bụla na-ekusaghị ha ekusa n’ahụ́. N’ezie, ndị Korea bụ́ ndị na-eyi hanbok taa ji ndị nna nna ha hà ụgwọ ekele maka otú uwe ahụ si ekusa ekusa n’ahụ́!
Ihe ọzọ na-akpali mmasị banyere hanbok bụ ihe a na-eme kemgbe ụwa nke bụ́ iji ụcha uwe amata onye bụ́ onye. N’oge gara aga, ndị ọchịchị Korea na-eyi uwe tụrụ àgwà, ebe ndị nọ n’ọkwá dị ala na-eyikarị uwe ọcha. Ọzọkwa, a pụrụ ịmata nwanyị na-alụbeghị di site na ya iyi uwe na-achakọta odo odo na ọbara ọbara. Ọ lụọ di, ụcha hanbok ya ga-ekwekọ n’ọkwá di ya nọ na ya. N’ememe agbamakwụkwọ taa, nne nwanyị a na-alụ alụ kwesịrị iyi uwe na-acha pinki pinki, ebe nne nwoke na-alụ nwanyị ahụ na-eyi nke na-acha anụnụ anụnụ. N’ezie, nke a na-eme ka ọ dị mfe ịmata ha.
Mgbe Agha Korea (1950-1953) biri, a malitere ime mkpọsa ka e jiri ihe ọgbara ọhụrụ na-eme ihe. N’ihi ya, ka ọ na-eru n’afọ ndị 1970, a kwụsịrị iyi uwe hanbok, e jikwa ejiji ndị bi n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa dochie ya. Ihe bụbu uwe a na-eyi kwa ụbọchị si otú a ghọọ uwe na-anọzi n’ala igbe. Nanị mgbe a na-ahụ ya bụ n’oge agbamakwụkwọ, n’oge ememe, na n’oge ndị ọzọ a na-eme ihe omume pụrụ iche.
Otú ọ dị, n’oge na-adịbeghị anya, a maliteghachiwo iyi hanbok. Dị ka ihe atụ, n’afọ 1996, e mere mgbalị ime ka ejiji ahụ maliteghachi iwu ewu mgbe e wepụtara Saturday mbụ nke ọnwa ọ bụla dị ka “ụbọchị a ga na-eyi hanbok.” Ndị na-emepụta uwe mepụtara hanbok ndị ọhụrụ, bụ́ ndị e mepụtara karịsịa maka ndị ntorobịa. Ihe àmà na-egosi na ndị mmadụ ịlaghachi n’ihe e jibu mara ha na-enye afọ ojuju, n’ihi na ejiji hanbok nke oge a na-ewuzi nnọọ ewu. N’ọgbọ nke ọtụtụ n’ime ejiji ndị e nwere na-egosipụta ọchịchọ anụ ahụ́, hanbok bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ejiji mara mma ma kwesị ekwesị.—1 Timoti 2:9.
^ par. 5 Ọ bụ ezie na e nwere hanbok nke ụmụ nwoke na nke ụmụ nwanyị, nke anyị na-atụle n’isiokwu a bụ nke ụmụ nwanyị.